रूसी परमाणु बेल्जियमले 2020 सम्म हाइप्रोनिक रॉकेट प्राप्त गर्नेछ
शुक्रवार, 191 मा TASS एजेन्सी, परमाणु क्रूजर पीटर द ग्रेट को आशंका को बारे मा जानकारी को बहाली को नवीनतम मोडेल संग - हाइपोर्सिक क्रूज मिसाइल। यो आधिकारिक रूपमा यो उत्कृष्ट हतियारको विकासको वास्तविक समाप्ति पुष्टि भयो। रूसी बेड़े को निपटान मा जर्कन मिसाइलहरु को उपलब्धता को दुनिया को महासागरहरु मा सैन्य स्थिति को रूप मा बदलिन्छ, बलहरु र लडाई क्षमताहरु को संतुलन। आधुनिकीकरण पनि एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र संग दोस्रो क्रूजर गुजरना हुनेछ - "एडमिरल नखिमोव"।
रूसी बेडा अपेक्षाकृत सानो छ, यो अमेरिका भन्दा धेरै सानो छ। सम्भाव्य दुश्मनको आर्मेडाको ठूलो आकार समुद्र तटमा अमेरिकी नौसेनाको विश्वव्यापी प्रभुत्व सुनिश्चित गर्दछ। चक्रीय रक्षा बजेट सयौं बिलियन डलर जलाउँछ, र धेरै जटिल समस्याले यो आक्रमणको सामना गर्न उत्प्रेरित गर्छ। एकै ओर, लागत आवश्यक छ कि देशलाई सैन्य दबाब महसुस गर्न आवश्यक छ; अर्कोतर्फ, यदि खर्च अत्यधिक छ भने, अर्थव्यवस्थाले यस्तो बोझ सामना गर्न सक्दैन, र रूस युद्धमा संलग्न बिना पनि पराजित हुनेछ। निर्गत पाइन्छ, र यसले अतुल्य उपायहरू समावेश गर्दछ। यसको मतलब यो हो कि रूसी नौसेना मा जहाजों को एक अनुमानित संख्या को बनाए राखयो, उनको लडाई प्रभावकारीता बढाने को लागी, को मुख्य घटक मध्ये एक को आगोशक्ति को रूप मा मानिन्छ। यो नयाँ जिरोनको मिसाइल प्रणाली द्वारा प्रदान गरिएको हुनुपर्छ।
कार्य - सम्मोहन बाधालाई पराजित गर्न
हास्यसेनात्मक हतियारहरूको समस्या कम्तीमा दुई अन्य देशहरूबाट ईन्जिनियरहरु द्वारा विकसित सैन्य औद्योगिक औद्योगिक परिसरहरु - संयुक्त राज्य अमेरिका र पीआरसी संग लडाइन्छ। एक नियन्त्रण मोडमा ठूलो गतिमा उड्न रकेटहरूको क्षमता प्राप्त गर्न, धेरै चोटि आवाज भन्दा बढि, सजिलो छैन। हवाइजहाजमा मिसाइल घर्षण अत्यन्तै तापिएको छ, किन किन कि जहाजमा उपकरणहरू ब्रेकिएको छ, पछाडी ढिलो हुन्छ, एन्टिनाहरू जसले संचार प्रदान गर्दछ। एक प्लाज्मा क्लाउड छालाको वरिपरि देखिन्छ, विनियमन तंत्र अस्थिर हुन्छ। यो यी शारीरिक कारणहरू हो जुन हाइसेर्सनिक बाधाको पहुँच गर्न बाधा बन्छ, जसको कारणले गर्दा फ्लुटरले सुपरसेनिक लाइनलाई विमान विमान भन्दा बढी पार गर्यो। रूसी वैज्ञानिकहरूले कसरी थुप्रै प्राविधिक र प्राविधिक समस्याहरू हटाउन व्यवस्थित गरेका छन्, सामान्य जनतालाई जान्न आवश्यक छैन, खासगरी जब उनीहरूको पद्धति एक राज्य रहस्य हो। जिरोनको राकेटको उपस्थिति पनि गोप्य छ।
जिरकोन के हो?
जब प्रकाशित ज्ञात जानकारी संग प्रकाशित जानकारी को तुलना मा, यो निष्कर्ष निकाला जान सक्छ कि यो 3K-22 अन्तर-प्रजाति मिसाइल परिसर हो जसमा परिचालन प्रयोजनों को लागि3एम 22 हाइसेर्सिक गोला बारूद हुन्छ। एक प्रणाली "एनपीओ मैशिनोस्टोरोनिया" मा विकसित गरिएको थियो। यस क्रूज मिसाइलको मुख्य लाभ देशका अवस्थित र संभावित मिसाइल रक्षा प्रणाली-सम्भावित विपक्षीहरूले गर्दा उडानको समयमा तीव्र कमीको कारणले गर्दा अवरोधको असक्षमता हो, जुन लन्चर र लुट्न बीचको अंतर हो। प्रेसमा लिइएका जानकारीको आधारमा, मस्यौदा परियोजनाको पूरा 2011 मा हुन्छ। पहिले नै 2012 मा, एक विमान वाहक को प्रयोग संग नवीनतम प्रक्षेपण को परीक्षण, टो -22 बमबारी शुरू गर्यो, र त्यस पछि विफलता को बावजूद, यो मानिन्छ कि प्रोटोटाइप भविष्य को सफलता को लागि महत्वपूर्ण हो।
एक वर्ष पछि, अर्को परीक्षण उडान भयो, अधिक सफल। लगभग मिसाइलले यो कार्यक्रम पूरा गर्यो, तर, टाटिकिकल मिसाइल हतियार निगमको प्रमुख बोरिस ओब्निओसोभको अनुसार, उनी म्याक 4.5 को गतिमा केहि सेकेण्डमा उड्न सक्षम थिए। यो पनि एक उपलब्धि थियो, र अनुभवको आधारमा प्राप्त भयो, टोलीले एक साधनलाई 14 तेर्सो (12,000 किलोमिटर / घण्टा) माथि बढाएको छ भन्ने सम्भावनालाई औचित्य दिईयो। अब यो स्पष्ट छ कि विकासकर्ताहरूले आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेका छन्। अल्ट्रा-स्पीड स्प्रिड क्रूज मिसाइलको "ओनिक्स" को पछिल्लो मोडले यसको भूमिका निभायो; यो एक आधारको रूपमा सेवा गरें, तर केवल 2.6 म्याचको दायरामा 500 किलोमिटर लामो हुन सक्छ। नयाँ साधन "हाइपरोस्रिक सामरिक क्रूज मिसाइल" को धारणामा आउँछ, जुन यो युद्धको एक स्रोतको रुपमा, सैन्य संघर्षको घटनामा सम्भावित दुर्व्यवहारमा अस्वीकार्य क्षतिको सामना गर्न सक्षम छ।
अन्तिम सफलता निर्धारण गर्ने घटक मध्ये एक, निस्सन्देह, नयाँ ईन्धनलाई "डीजिलिन-एम।" भनिन्छ। यस अनूठा ईन्धनको बारेमा छोटो मा भनिएको छ, र धेरै विस्तार बिना, सेना जनरल बुलोकोव, रक्षा उप निदेशक। "डिसेलिन-एम" पहिले नै रूसी सशस्त्र सेनाको सेवामा रहेको छ, र यसको प्रयोगले स्पष्ट रूपमा पश्चिमी विश्लेषकहरूले आश्चर्यजनक कारणले रूसी मिसाइलहरूको लडाईका क्षमताओंको कारण आश्चर्यलाग्दो भएको बताएका छन् जुन हजारौं किलोमिटर भन्दा बढी दूरी तिनीहरूलाई पुग्न योग्य छैन। कास्पियन फ्लूटाला "कैलिबेरिया-एनके" को जहाजहरु को प्रथाहरु को साबित भएको छ कि उनि दुश्मन सम्म पुग्न को लागी पहिले भन्दा पहिले ग्रहण गर्न सक्छन्। नयाँ हाइसेर्ससेनिक सामरिक क्रूज मिसाइलहरू ईन्टरनेट "डिसेलिन-एम" वा यसको पछिल्लो परिमार्जनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
जहाजहरु को आधुनिकीकरण को लागि योजनाहरु
वर्तमानमा, भारी परमाणु-संचालित क्रूजर पीटर द ग्रेटले बीस लामो-स्तरीय जहाज-जहाज क्रूज मिसाइलहरू ग्रेनिट पी-700सँग सशस्त्र भएको छ। 550 किलोमिटरको परिचालन त्रिभुजको साथ, एसएम-233 लन्चरहरू, माथिल्लो डेक तल रहेको स्थानमा राखिएको छ। 2018 मा, यो आधुनिकीकरण सुरु गर्ने योजना भएको छ, जसको समयमा एकै स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय लन्च प्रणाली 3C-14-11442M दस को मात्रामा स्थापित हुनेछ, जसमा प्रत्येक आठ आठ मिसाइल क्षमताको क्षमता छ। जहाजको आगो बलले चार गुणा बढायो, तर यो पनि मुख्य कुरा होइन, तर क्रुजरलाई रोक्न अपरिहार्य असर। तथापि, TASS रिपोर्टले अत्यावश्यक विशाल, "एडमिरल नखिमोव" को "ट्विन" उल्लेख गर्दैन, जसको आधुनिकीकरण पहिले नै सिविनोडविन्स्कमा अक्टोबर 2015 देखि नै रहेको छ। अर्मेज-एंटीई चिन्ता र सेवमैश संयन्त्रको बीचमा सम्पन्न सम्झौता अनुसार, पु 3-एस -14-11442 एम को डिलिवरी पहिले नै नियोजित गरिएको छ र, एक अजीब संयोगको अनुसार, केवल दस टुक्राहरु मा मात्रा मा।
दुवै परमाणु क्रिस्जरहरूले यस्तो शक्तिशाली हतियार पाउँनेछन् जुन तिनीहरूको व्यावहारिक असीमित परिचालन त्रिज्या दिईयो, यसले तिनीहरूलाई तीव्र गतिशील प्लेटफर्महरू आठ दर्जन क्रूज मिसाइलसँग बनाउनेछ, जुन यसले अवरोध गर्न लगभग असम्भव छ। अर्को मुद्दा भनेको यो कक्षाको जहाज एस्कॉर्ट्स को अनुशंसा गर्नु पर्छ, अन्यथा तिनीहरू पनडुब्बीले आक्रमण र मेरो आक्रमणका लागि लक्षित गर्न सक्दछ। यो पनि एक महत्वपूर्ण समस्या हो, र रूसी सैन्य-औद्योगिक परिसरले यसलाई समाधान गर्न पर्छ। एकै समयमा, क्रूज मिसाइल Zirkon स्वाभाविक रूपमा एक सार्वभौमिक हतियार हो, समुद्री र स्थलीय दुवै कुनै पनि लक्ष्यलाई हराउन सक्षम छन्।
2020 सम्म सिपाहीले योजना बनाएको छ, यस अवधिमा परमाणु क्रिस्सेर्स एडमिरल निखिमोभ र पीटर द ग्रेट छैटौं जेनरेटरको मिसाइल तथा लन्चरको साथमा पुन: लैजानुपर्छ, जसको तुलनामा सम्भावित विपक्षीहरूले बाहिरिने सबै प्रणालीहरु लाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। कक्षा अप्रचलित। जिरकोन रकेटहरूको सीरियल उत्पादन ओरेनबर्गमा स्ट्रेला उत्पादन एसोसिएशनमा स्थापित गरिएको छ। 2011 देखि, अग्रणी डिजाइनर सर्गेब बान्कोवov, डेनिस विट्शकिङ्क, युरी वोरटोन्सिभ र एलेक्सनी निडेनवले "वैज्ञानिक र उत्पादन एसोसिएशन अफ मेनेनिकल ईन्जिनियरिङ्" मा3एम 22 परियोजनाको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यो उनीहरूलाई शुभकामना र सफलता चाहना बनी रहन्छ।
म्याग्नेशियम मिश्रहरु: अनुप्रयोग, वर्गीकरण र गुण
टेक्निकल पाइपलाइनहरू: स्थापना, सिफारिसहरू र परिचालन नियमहरू
एटीजीएम टैंकको विनाशको लागि एक हतियार हो। ATGM "कनेट": प्राविधिक विशिष्टताहरू
शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि स्प्रे "फ्रस्ट": निर्देशन। फ्रस्ट स्प्रे चिसो खेल को समीक्षा
के सुशी लागि लाठी बनेको गर्न सकिन्छ? शिल्प र दैनिक जीवनमा प्रयोग
Borisov ponds - Muscovites बाँकी एक मनपर्ने स्थान
गैर-विनिर्माण व्यापार को लागि पर्यावरण भुक्तानी
त्यो पर्यटकहरु होटल Simena होटल5प्रदान गर्दछ? होटल विवरण र समीक्षा